Mpamatsy milina fampangatsiahana Counterflow mpamatsy vola mora vidy | YiZheng
Masinina fanamafisana ny onja fanoherana dia taranaka vaovao fitaovam-pialana voly miaraka amina mekanisma fampangatsiahana tsy manam-paharoa. Ny rivotra mangatsiaka sy ny fitaovana avo mando dia manao hetsika miverin-dàlana hahatratra ny fampangatsiahana tsikelikely sy mitovy.
Inona no atao hoe milina fanamafisana ny onja?
Ny taranaka vaovao an'ny Masinina fanamafisana ny onja fanoherana nohadihadiana sy novolavolain'ny orinasanay, ny mari-pana ara-materialy aorian'ny fampangatsiahana dia tsy ambony noho ny maripanan'ny efitrano 5 ℃, ny tahan'ny rotsakorana dia tsy latsaky ny 3.8%, ho an'ny famokarana pellets avo lenta, hanalavana ny fotoana fitahirizana ireo pilika ary hanatsarana ny Ny tombony ara-toekarena dia nitana andraikitra lehibe. Izy io dia maodely iray be mpampiasa any ivelany ary manolo ny fitaovana fampangatsiahana nentin-drazana.
Fitsipika momba ny asa amin'ny milina fanamafisana ny onja
Rehefa mamaky ny Masinina fanamafisana ny onja fanoherana, nifandray tamin'ny rivotra manodidina izy ireo. Raha mbola tototry ny habakabaka ny rivotra dia hanaisotra ny rano ambonin'ny vongany. Ny rano ao anaty ireo sombin-javatra ireo dia afindra mankany amin'ny alàlan'ny capillaries an'ny zezika zezika ary avy eo entin'ny etona, noho izany dia mihamangatsiaka ireo zezika zezika. Mandritra izany fotoana izany, ny hafanana entin'ny rivotra, izay manatsara ny fahafahan'ny rano mitondra. Ny rivotra dia avoakan'ny mpankafy hatrany mba hanaisotra ny hafanana sy ny hamandoan'ny granules zezika ao anaty cooler.
Fampiharana ny milina hihena hiasa onja
Ampiasaina indrindra hampangatsiahana ireo akora granular avo lenta aorian'ny granulation. Ny masinina dia manana mekanisma fampangatsiahana tokana. Ny rivotra mangatsiaka sy ny hafanana ambony ary ny fitaovana mamandoana avo dia mihetsika amin'ny lalana mifanohitra amin'izany, mba hampangatsiaka tsikelikely avy any ambony ka hatrany ambany ireo fitaovana, hisorohana ny famakiana ireo fitaovana ateraky ny cooler mitsivalana ankapobeny noho ny fihenan'ny tampoka.
Tombony azo avy amin'ny milina fanamafisana ny onja
ny Masinina fanamafisana ny onja fanoherana dia misy vokany tsara, ny avo lenta amin'ny automatisation, ny tabataba ambany, ny fandidiana tsotra ary ny fikojakojana ambany. Izy io dia maodely iray be mpampiasa any ivelany ary fitaovana fanamorana fanoloana mandroso.
【1】 Ny maripanan'ny sombin-javatra mangatsiatsiaka dia tsy ambony noho ny +3 ℃ ~ +5 ℃ ny maripanan'ny efitrano; rotsakorana = 3,5%;
【2】 Izy io dia manana fiasa tsy manam-paharoa amin'ny famoahana pellet mandeha ho azy rehefa mihidy;
【3】 Fanamangatsiahana fanamiana ary fanorotoroana ambany;
【4 structure Rafitra tsotra, vidin'ny fandidiana ambany ary asa kely an'habakabaka;
Fampisehoana horonan-tsary milina fanamafisana Counter
Safidy fisafidianana milina fanamafisana milina fanoherana
Volana mangatsiaka (m)
Teo aloha: Pulverized Coal Burner
Manaraka: Milina Rotterie Drum
Fampidirana Inona ny masinin-kambana Granulator Extrusion Fertilizer Granulator? Ny milina granular Double-Screw Extrusion dia teknolojia granulation vaovao tsy mitovy amin'ny granulation nentim-paharazana, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, zezika ary indostria hafa. Ny granulation dia dingana lehibe indrindra amin'ny granulation vovoka maina. N ...
Fampidirana Inona no karazana Granulator zezika voajanahary vaovao? Ny New Type Organic & Compound Fertilizer Granulator dia fitaovana fitobiana mahazatra ampiasaina amin'ny famokarana zezika, zezika organika, zezika biolojika, zezika famotsorana voafehy, sns .. Mety amin'ny hatsiaka lehibe sy ...
Fampidirana Inona ny masinina mpamaky vovoka rojom-bary? Ny Vertical Chain Fertilizer Crusher dia iray amin'ireo fitaovana fanamoriana matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny zezika. Izy io dia manana adaptability matanjaka ho an'ny fitaovana misy rano avo lenta ary afaka misakafo tsara nefa tsy manakana. Miditra avy amin'ny f ...